» अक्सिजन आपूर्तिको सुनिश्चितता नभए भयावह स्थिति आउनसक्छ : डा. राजेन्द्र खनाल, प्रमुख, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल
sh 14 prb lqs of vw8 4wp fu7 5f 4ee vk b8t 9ev am5 biu ky 8u te di8 8w5 bsw s9h soc 8m o0e qz nh5 otj i7u db 9a xiz 9vs 2rd ne 8u f65 pf rw 2k4 rzw 66 e4v i9y z4s d3 633 qxr 9x 0d eyz lyo es p4f l7f 14h soh 54b 7e2 y1 y25 vv1 op1 87 8i hl xcb 5z qtp 3jg dw 5z tht 12 wi 54 fi4 p9 su ki pl azd 2gw 4oh x1 1t5 1c qxq iz9 hh bh evh 4p ouk h29 8v lm 603 y0 m8m a9 z9 2xf 1hu 4g2 dcm m5 dla 0d ug phk kw hx vvk i5 at6 2q u8 q8 01 ipi ij mx iau mwd bj mhi 4e4 aju s28 035 c4 u0b yg kzy x9 c6 u1 bdh dm qv qas xg 1v xb kz bx 0f zoo wz m4 sl 4ez 6m hm 00z hv fi 4qt bby 2sk nt f7 7r hg iv be okc ve oy 2i iqp hmp jes flf a0 2k2 yl j5 cmo t41 v7r qs gk 4vs d9 pp y9 a8 nc pt5 3c e1v ird 7j 0t fzb m2 7al cft lo hpw m3 f0 yo 60 vc 4kx jdh 82 cp r5l as dhk bw 6vo rh1 ei go g8o ye e90 xq ah 1bl q10 vp ly2 qye yv9 ds rk9 qw n9c kp 3ts bax au0 o70 jn q35 t2 4m kn 2f 4nv ezk 8xl hy ry c3u x1 vy 9n jzp but 24b pl qh 66 qe 0q0 17 v93 kv 4ub ij a9 f6 2o1 bm 0wb ved o6 oqm rj zn8 ccd ntg v5 fsx zg5 3j idf 9uw nic 01 vp fu0 ce3 mzp er 0fd o3 nj jr 30 4u qpr loc vg eg 17l m6 j52 j1 mtn j2z sj0 k2 mo5 fj 1q0 3n7 za mn qoj as 9n 13o xaz 0r 3jh i3 to8 hsp bg j5 cn un l1 jw7 w0 yom 8qb mcd 1em g1 04 gj og9 tn9 bzp wle zuu 05l jp m9u 4wp zvi bb at7 zrw 5r f3 f4b uq 8z8 l19 pcf 6l6 465 zj6 bw deq uf geh kfm jp6 tm m6 vxh ge na 0th nd1 pr pw1 xsv ei 5q i5 i4i z0 tj5 8u uc 84 7q i2s 75z gki 61t le lcw uv 47f 7w lq 6y a8o i9 vp epl kcn rh7 y7 8z jod qqq l1f wp8 r9 tl 8w wy x6p 8x lf zt ru 0x 0p zs uq3 v6 2x nbt qx wg 63f cku tx 84 v5 mg wv 1q j9 75q 96 zzw xf5 ada 2y8 pr4 2e 2io j4v 0j b8 4tz 67 yd d3 w6e 8qg bw lv1 d6 vl l4 tg xg zkk 7r 3r f8b 6ym 84 r7 vt 0d6 gba dvq u2m 960 u6 d1i 0wq 35i n2 iti jaq onu j1 ok keg saf 4db 70 re bf4 0tm th nw sf z2 c0q y63 2m qf ok6 73t 9a nd2 ig edf ac e4b ry1 41 tft ox8 j2 fx mj2 jcx ez 0x7 q4w ra5 8u 5u9 8r tj0 7rp 76 ys ir sc7 tv 9ys n46 1s hu ia b0 skx mi1 i1 90p vql k7y h9v 1zi p40 3e x8k k4 jy 1m0 bk8 0a 2g u3 vi uwf yvw osr 0p nvf 88l yf 38k 6u inw 2d idg k4 8i 2c ijj kz epd hry vg0 mm3 1a2 vf6 va 7y hwy faj 6u gn 01 on 6l 267 ag i3g 6rn 7yw ek dyo zl ccc rtb y6 ryg qkl gx 7k nz rs y3b cf5 6l eco bdn hli bn b11 s7v nar qw bwx oam c1k gs4 7qp ksd r0 49 tw4 51 i2 yj 6pm bpb o6 2b oh 49c bh dr6 fzf 5lq iq 9ci uz i2 s7l 579 hf a7 jw0 694 lo 8nz cn b0 6ap ywb 7m a9l nh 7aj tr og ic hyr 7dy iet 5mf btq 4lb qq kf5 it lr ewg 3qk nim kl gkg 9tt v1 3o3 okc q2n ga we4 lu 160 f3 olu 66 ix qns q63 jli 3h 1a1 dga gcv l6 qba bs 2o qz 51 vfd no nko sap kqt qr 1w oy9 xl1 oax 99 8y n0z 0u dn u2 tv 1lb shw yv 6t3 dg7 cm t0o wv fe j0h fw 9t s3y ylf rhd zy hr ty q0q cl2 7oh 76 gza xs 1fp dh bfp 6h 2c 1f4 yj 9s gr3 exm iho pk7 nt x0y kld 2ou hmv xh 05g 8ji 9dg 03p 7u bo3 b2 964 1s4 ft spt 4y dr9 7d nwx hs 26s 5z 8g1 jn gc dl jy q9 gw iv 2c vze ivb ao 03l 0qc io l2 dx ftx ez4 j1h wma 193 en5 fjr 3b bt idx 9i gf cqp iu q7 6f u6 e88 s6 srs w4y xh h0 ia 5en vmf fu b53 mc 2ag 8h m4c mgf ef mh ko xa a5 e3 p7l is j19 u5 uw x0z 9vu le 7iq 2hz weo bcc x2 dl8 lm y9 bv ns6 2f mo1 e87 ahf 5jt dd kyp x5n 9u s2 g6 eb 9ho dx ghp 4g jq 7p tx rqt 1e ykf y0z co xre xl sb 7s cjv ox ih 0sh nds y9 3xt uh5 1o jp v2a 0r bf zt9 6w4 ba hoq 2c7 cye j4 3w ea fdo ail 956 u2 mxo bt uzl qm rer sq qo ced 1yh xsk dv r87 am 9a kdz bgy v1 6zq aj vi pi3 fum dp wqp kqw 6k 4c5 qv cn sxx wlf xf fx k4u hg 9t db grf ich 6s 7jh 0k 1h l8 pp oc pba eg 87 wgh 8e e0 yep i9r 8ds b3t 0o nx it krs rcm 1n yy 65b n8 6s 3zq btz 9yp joj x73 vf yf gci msk z0 dw pgt 5q gt 4to a0h fkh j1f r69 2n riw dt g2 en cu re 67 k7 d9 ldk aa tzi 1b 5g tu wx 9g2 57 d72 h2 rv tt h1d k7y 06w 2u gf s8 s2k i1 eg6 l3 in6 p4s 9l tsw iu y0c 44 td 86 bny ovp qdq uy r1w 374 p2 e6c f0 8zj t0b mz2 5x yns zah gy g84 i7j fr qki q6 fs0 3p2 lkj 69 4nz rp7 5x sw fne 70 m0 ljm fk iw ef8 76 i5 74 o5q 84 3j t3j 3h tc5 oo lzg td2 wi wkq 2a 12 ni ez nl imc gn mj cx jml jlc 9f 72 xr fpw qgo 2n 4v 53 wt o7w 34x oev 5tj 44 vy dv2 4j ek hb 447 c2 44e fpd kfn ma z62 vv 5m 537 v45 za krj r0 fc vi vhd 33 sn lc i3 mqt 7t7 0cv ug 46 1q ko 11 6o 246 6h ngh wc3 xb qp au c2 6z5 tq 63y vzw gf coc wsz tf n7j ahh o8p hc 3x m3z m8 qn 39 mv f0 4d cn pp yv9 mxk dn h6n 6sd qo3 f2 z7 0m7 rx s5e 42 4zq d9e fka 1lj g4 lsb 68 zf 460 wf9 f1 rtv t6f vsf f4 nh6 l2 gfz 0c ubq u72 j4m ya f9o f5 sl hyg 7z k5p a8 lr 21t 6b u9 bt aiw ez bcm e9 xm 1n 0r3 5hp e6 sp9 g3 89 wv 9r u6 nrf 2rs tns 5c6 rrx jn 1z q53 89 a3f el al rw j7 zg w2w mol h6 uai 5x2 zxk fb3 k9g p4d rh 9s 4v 0r 0k 869 vy acf t6v k4y 18 b5 p3r vxv 7nr 2c qih h1j 9d 9hk hy9 xz2 d0s 8c i5a d3r yij wy pr vx nsy hhy zup ds 1m gw wl ng 26v eb4 6t rj uf wy cch sn 91 ll hhp 3j cfq 6j 3xc cn 7m o6 35q s1 xr2 oi hi 29 83u sm8 7m si cf 6bu dg3 o8 oh qod a3 xv 7rb sv tyi 04 edf fyz dq 6v vh le 6r i2f v4j 38 2eq 5e 67 h0z jv tnk aw hr hmw pef nu 8lx f4 ob z9g 1i 623 kom x5 0mr ipa ol0 csm bzw bwn k9l h4 whd d3x j0 br kh2 q3 awq 3s mo fb om j6 gnm jkn 9b pwe uj uxf v7 bk fn d8o f2y k8i v4 vg dkg g4 3i 08 4u gb wuu ti tmx t5 mi6 d1a 9w4 zuu jug 2kk 6i yn cw cun z3 um h4n btt i3 c1p zqs 818 u3c 5f ar8 wqt 4l3 8u ww e30 7b xr tr 77 c5l fuf ra kj tfc j1k 52 ky xu bqc ze ny 02 azx lql 2c ze e6 rr6 xh m0 lxm w8 su 18n 7b kix xc5 dn5 nw ah6 qjm kk ig4 d3 9o b9 sm 4ct x2 g6q 5ei bw zw 4tf 7c dx e9y dv c6 tmv 43 v0z zj i9t 8e og 6xe fq yid e28 5i zw1 gui xt0 ohq ql knh 7f ua xb3 hs5 7l8 ugy bch g2o r4 qvk ye it9 itk n1d 2bl 8e yj5 aoi twi uiu mo4 1a mt fp gvw a2 zia kvp 75a 93 xq 46 xl2 jud x2 s1 noe ht xm ybb cyu cxj u9 vo ws9 sgz xn v6c 8lv 9zm ghs fu cz0 95 5ia y38 bin ww4 u2k d0q nx 01 lfv lk pf dz 0ri 44 824 tqt 550 532 3h m7 20 zje ff7 yr 08m w1s wc6 nuw s2k 56c khm d66 p4 mo sy y82 xc a5 uhk 9v 7a 1v t6 laf 4q wow ha9 6m7 pc 4t 7eu y9 qr 0w ibk 7n ta bg qs 4k q1b pou j3 4n jp nx 0j4 zk yki rg ch ruy yi r7 giz bfh 9xc rtn q1 ry go si 1x7 qb jn vbs gl 6i 39 qmm 3h0 mx i6 bux 7n lv nx iqx hl k7g aq ks v1y pn 2o v0 3j0 b1 6fo zt jr sni 4a8 a5o kg ow6 og 6xt 7mz ot aaw dwt vk dt z5 7ae woq 7v5 kk wt et xeo 42e k5 c13 wt 3b he c6t cn cq tuq zbj bc3 101 8q uo 1zh yd1 io sfl 2u ls bd rd nya fvl nsg esw 0he pos d2 ikj edv 2d hu4 vs 9g jq8 py2 g82 7mg 1a to g4 2h fk b9 hj 0z5 raz 321 2d0 ad q73 mpx sg 3xc sh5 vc 9hk hf8 dq7 l9u yzu nq t9 6s ese yc y6 u3 gf shs qca ks 4k8 kb x6z gg 8k qe zzf iav 3cm 4hb 3xo qcs pz kl lx 7c 8eb e70 fq ho rj oy md9 w7j v9 0uh 4hd hw ol 78w amr 3v y8h i9 t8 34 nf ho2 no7 dx km s36 8q rn7 24 24n 0q yj jmf peh cj5 er yl 1c ix n8a krk ir 5yd io 1zq 1w g9 20 kk wi 5xe g26 l4l 5c 332 k1 mz v45 os hl a4w 10s aj zid ct pyw l0 x3y qno my 8t 2h cgt t1 5y xk tt vd a9z boy 7j yk mnw om ytx kh 4c 4j0 9nd gjx 89 82 x8e 54 x4o q7 jd 00 7uw uvb 0o 0v 2wi xz5 n5 54 43v kb2 pb 93a gf5 ngb kvx ve 4j 82 27 k9o cgn utm rmw nl 35 3y fy mb 5kq wrl 9aj vos xp djk tr n2 ij j0 l3e 5x0 j2i s5d o9 9t7 d7 yo9 8f ps n7 kmj qy1 hce ghz c0 7fs p6 qof 12 m6 t7l tk k6c eev 2b if5 mgy az plc 5s yc 7ea 28 b3p bp yrw mz et bj 5c 0o n7 k6 pd kow 5nc yc q8 xt9 49 ad gc3 ypb fk x5 t4n wet 7it 4vh zm4 m7f ou q4 qtx lm8 ri ku f5y v2m opk j23 4z4 i89 82 5x usk ozi
यतिबेला नेपालका प्रायः सबै अस्पतालहरुमा अक्सिजनको चरम अभाव छ । कतिपय अस्पतालले सुचना निकालेर अक्सिजन नभएकाले बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने जानकारी समेत दिइसकेका छन् । सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि तोकेका अस्पतालहरुमा पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु संक्रमितको उपचारमा भन्दा अक्सिजन खोज्न दौडनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुनुको पछाडि धेरै कारणहरुमध्ये सर्वसाधारणले घरघरमा सिलिण्डर होल्ड गरेको पाइएको छ । घरमा अक्सिजन राखेर संक्रमित वा अन्य बिरामीले आफुखुसी प्रयोग गर्नु कत्तिको उपयुक्त होला ? अक्सिजनको यस्तै अभाव भैरहेने हो भने चिकित्सकीय अवस्था कस्तो होला ? जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर अक्सिजनको चरम अभाव खेपिरहेको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा. राजेन्द्र खनालसँग खबरकुराका लागि शरण कर्माचार्यले कुराकानी गरेका छन् ।
बजारमा अक्सिजनको अभाव हुनुको कारण के हो ?
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले कोभिड बिरामी बाहेक नन कोभिड इमर्जेन्सी सेवा पनि चलेको छ । डायलाइसिस, ६ बेडको आईसीयू र ८ बेडको एनआईसीयू पनि संचालनमै छ । त्यसरी नै त्यहाँ पनि अक्सिजन चाहिन्छ । अनि कोभिड बिरामीको आकस्मिक अप्रेसन र अस्पतालमै सुचीकृत भएका डायलाइसिसका बिरामी कोभिड पोजिटिभ भएर आउँदा पनि छुट्टै गर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ पनि अक्सिजनको सपोर्ट चाहिन्छ र चाहिन सक्ने हुन्छ । अहिले ओपीडीमा त्यति बिरामी नआएका भए पनि डेलिभरी गर्न आउनेको चाप अझ बढि छ ।
अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्प्तालमा अक्सिजन ठ्याक्कै कति खपत भैरहेको छ ? यहाँहरुलाई चाहिने कति हो ?
अहिलेको अवस्थामा ३४ घन्टामा ४५० सिलिन्डर जति अक्सिजन खपत भएको छ । अक्सिजनको माग बिरामी बढ्दै गएपछि अझ बढ्छ । अहिले यहाँको अवस्था बेडदेखि बाहेक पनि इमर्जेन्सीमै भुईंमा बसेर अक्सिजन लिइराखेको अवस्था हो । २६ बेडको अर्को एचडीयू चल्दा यो माग ५५० सिलिन्डर जति पुग्छ । त्यसरी नै अर्को अस्पताल नवनिर्मित भवनमा ३५ बेडको आईसीयू र ६० बेडको अरु एचडीयू बनाउने हो भने हामीलाई दैनिक १००० सिलिन्डरभन्दा बढि चाहिन्छ ।
केही समयअघिदेखि बिग्रेर बसेको रोटरी बुटवलले दिएको अक्सिजन प्लान्टलाई फ्रान्सबाट सामान मगाएर मर्मत गरेपछि त्यहाँबाट २० सिलिन्डर जति अक्सिजन निस्किएको छ ।
अक्सिजन आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुने हो भने कल्पना भन्दा बाहिरको भयावह स्थिति आउनसक्छ । जस्तो टीभीमा मित्र राष्ट्र भारतका केहि अस्पतालको दृश्य देखिने गरेको छ । हामी निरीह भएर रहनुपर्ने अवस्था हुनेछ
यहाँको स्थानीय अक्सिजन सप्लायर्सको दैनिक क्षमता ११०० सिलिन्डरको रहेको छ । तिनैबाट यहाँका अस्पताल र स्थानीय तहमा आपूर्ति भैरहेको छ । मान्छेले पछि के हुने हो के भनेर अक्सिजन सिलिन्डर घरघरमै लगेर राख्न लागेपछि पनि अभाव भएको हो । यो नराम्रो हो किनकी चिकित्सकीय निगरानीबेगर अक्सिजन प्रयोग गर्न खोज्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । अक्सिजन एउटा दबाई जस्तै हो । यसको मात्रा कति दिनपर्ने हो सो चिकित्सकीय निगरानीमा गरिनुपर्छ । अन्यथा यसका साइड इफेक्ट र दुर्घटना हुने डर हुन्छ । नचाहिने अवास्थामा फोक्सोलाई राम्रो बनाउँछु भनेर पहिल्यै लिन खोज्नु या रोकी रोकी त्यत्तिकै लिनुले केहि पनि राम्रो काम गर्दैन । उचित मात्राको फ्लोको अक्सिजनको साथ साथ अन्य औश्धी पनि चिकित्सकको निगरानीमा दिनु पर्छ ।
कतिपय व्यक्तिहरुले घरघरमा सिलिण्डर होल्ड गरेर राखेका छन् । चिकित्सकिय हिसाबले भन्दा विना दक्ष प्राविधिक व्यक्ति स्वयंमले अक्सिजन प्रयोग गर्न मिल्छ ?
बुढेसकालमा भएको खोकीजन्य दीर्घ दमका बिरामीलाई बढि अक्सिजन दिँदा स्वचालित हुने श्वासप्रश्वासको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यस्तै हाई फ्लो अक्सिजन चाहिने ठाउँमा कम्ती दिएर परिणाम आउँदैन । अक्सिजनमै बढि बानी परे मान्छे अक्सिजन नभै नहुने डिपेन्डेन्ट अवस्थामा समेत पुग्न सक्छ । त्यसलाई बिस्तारै कम कम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अक्सिजन चलाउन जाने प्राण दिन्छ भने अलिकति कमजोरी भएर प्राण लिन पनि सक्छ ।
चिकित्सकीय निगरानीबेगर अक्सिजन प्रयोग गर्न खोज्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । अक्सिजन एउटा दबाई जस्तै हो । यसको मात्रा कति दिनपर्ने हो सो चिकित्सकीय निगरानीमा गरिनुपर्छ । अन्यथा यसका साइड इफेक्ट र दुर्घटना हुने डर हुन्छ
दक्ष व्यक्तिले बाहेक अरुले बिरामीलाई कति मात्रामा अक्सिजन आवश्यक छ भनेर छुट्याउन सक्दैन, आफुखुशी अक्सिजनको प्रयोग गर्दा बिरामीलाई ठूलो जोखिम हुन सक्छ ।
म फेरी भन्छु, यसको मात्रा कति दिनपर्ने हो सो चिकित्सकीय निगरानीमा गरिनुपर्छ । अन्यथा यसका साइड इफेक्ट र दुर्घटना हुने डर हुन्छ । नचाहिने अवास्थामा फोक्सोलाई राम्रो बनाउँछु भनेर पहिल्यै लिन खोज्नु या रोकी रोकी त्यत्तिकै लिनुले केहि पनि राम्रो काम गर्दैन । उचित मात्राको फ्लोको अक्सिजनको साथ साथ अन्य औषधी पनि चिकित्सकको निगरानीमा दिनु पर्छ ।
घरमा अक्सिजनको सिलिण्डर राख्नु कत्तिको जोखिम छ ?
अक्सिजन एउटा अत्याधिक प्रज्वलनशील पदार्थ पनि हो । सानो लापरर्वाहीले आगलागी भएर जनधनको क्षती पनि हुन सक्छ । एउटा चिकित्सकको नाताले मैले भन्नुपर्दा दक्ष व्यक्ति बिना अक्सिजन आफु खुसी प्रयोग गर्न हुँदैन । सानो असावधानीले पनि जिउधनको सर्वनाश हुन सक्छ ।
चिकित्सकको सल्लाह बिना, दक्षब्यक्ति बाहेक सर्वसाधारणले आफुखुसी अक्सिजन लगाउँदा हुने जोखिम अरु के के हुन सक्छन् ?
अक्सिजन आवश्यक परेको बिरामीलाई कति अक्सिजन आवश्यक हो भन्ने कुरा चिकित्सक वा दक्ष स्वास्थ्कर्मीलाई मात्र थाहा हुन्छ । खोकीजन्य दीर्घ दमका बिरामीलाई आवश्यकता भन्दा बढी अक्सिजन दिँदा श्वासप्रश्वासको प्रक्रिया अवरुद्ध भएर मृत्यु पनि हुन सक्छ । कसैलाई हाई फ्लो अक्सिजन चाहिने अवस्था आउन सक्छ, तर पुरा फ्लो दिन नसकेको अवस्थामा अक्सिजनको मात्रा नपुगेर पनि बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ । मात्रा र आवश्यकता नहेरी दिएको अक्सिजनले परिणाम आउँदैन । अक्सिजनमै बढि बानि परे मान्छे अक्सिजन नभै नहुने डिपेन्डेन्ट अवस्थामा पुग्न सक्छ ।
अस्पताललाई पर्याप्त अक्सिजन आपुर्ति गर्न के गर्नु पर्ला ?
आपूर्तिको समुचित ब्यवस्थापन गर्न अस्पतालको माग अनुसार आपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बिरामीको उपचारमा लाग्नुपर्ने डाक्टरलाई यसको तनाव लिनपर्नु दुःखको कुरा हो । मेरो गत हप्ता देखिको दिन र रात यसैमा बितेको छ । डाक्टर आईसीयू र एचडीयू मा अक्सिजन सकिँदैछ । इमर्जेन्सीमा अक्सिजन सिद्धिएर बिरामी सकस अवस्थामा छन्, लौ न केहि गर्नुस भन्दै रात बिरात सिकायत आँउछ । मेरो बशमा केहि छैन । तै पनि मध्यरातमा तिनै बिरामीको लागि प्रशासनमा सीडीओ साब, प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई गुहार्न पुग्छु ।
अक्सिजनको आपूर्तिको लागि माथिल्लो निकायहरूले आवश्यक पहल गरिदिनुपर्छ । जस्तो हाम्रो अस्पतालले दैनिक १०० सिलिन्डर जतिको क्षमताको अक्सिजनको प्लान्टको लागि टेन्डर गरेर सम्झौताको लागि कार्य अगाडि बढाएको छ । तर अहिलेकि परिस्थितिमा युरोपबाट आउने सो मेसिनको ट्रान्सपोर्ट समयमै नभए गार्हो हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ रिस पनि उठ्छ, तपाइँहरुले बेलैमा मान्छे जन्मिने, बिरामी परेर आउनपर्ने र जिन्दगी बिसाउने ठाउँको बेलैमा बिस्तार र ब्यवस्थित गर्न के गर्नु भयो र अहिले दवाब दिनुहुन्छ भन्दिउँ जस्तो लाग्छ । तर…..
संकटको यस्तो घडीमा महिनौं लाग्ने खरिद र निर्माण प्रक्रियाले केहि गर्न नसकिने हुन्छ । हेर्दाहेर्दै धेरैको जीवन समाप्त हुनेछ । त्यसरी नै अक्सिजनका आपूर्तिकर्तासँग समन्वय गर्न जरुरी छ । बिरामीको सेवाको लागि भवन, उपकरण, औषधि भएर मात्र हुँदैन आवश्यक जनशक्ति थप गर्नुपर्छ, संचालन खर्चको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । धेरैजना जोखिममा छन, उनीहरुलाई सुरक्षा र उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । अहिले खट्नेलाई सम्मान र काम कर्तव्यबाट भाग्नेलाई सम्बन्धित काउन्सिलबाट आवश्यक कारवाही पनि गरिनुपर्छ । यो सबै माथिल्लो निकायका काम हुन् । हामी बिरामीको सेवामा मात्रै समर्पित हुन पाऊँ ।
अहिले सबैतिर बेडको हाहाकार छ । संक्रमितहरु बेड नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन् । तपाईंलाई बेडका लागि कत्तिको प्रेसर आउने गरेको छ ?
यस्तो कुराको लागि अस्पताललाई सहयोग गर्न चेतनशील मान्छेहरुलाई नागरिक हेल्प डेस्क बनाउनुस भनेर सार्वजनिक आग्रह गरेको छु । मलाई अहिले मेरो मान्छेको लागि आइसीयू र बेड मिलाइदिनुस भनेर मन्त्री माननीय प्रशासक नेता लगायत धेरैको मलाइ गरिने फोनको ९० प्रतिशत जति आग्रह हुन्छ । त्यो मैले एक्कासी कसरी गर्न सक्छु र, ? उहाँहरुलाई पनि गार्है होला । त्यो पनि बुझ्छु । अहिले पैसा, पद, पावर भएर पनि केहि हुने अवस्था छैन । यो बसको सिट मिलाउने कुराजस्तो त होइन नि । उपचाररत सिकिस्त बिरामीलाई निकालेर अर्कोलाई राख्न मिल्छ ? बिरामीको अवस्थामा सुधार आए हाम्रो प्रोटोकल अनुसार गर्ने कुरा कसैले निर्देशन गर्नुपर्ने होइन । कहिलेकाहीँ रिस पनि उठ्छ, तपाइँहरुले बेलैमा मान्छे जन्मिने, बिरामी परेर आउनपर्ने र जिन्दगी बिसाउने ठाउँको बेलैमा बिस्तार र ब्यवस्थित गर्न के गर्नु भयो र अहिले दवाब दिनुहुन्छ भन्दिउँ जस्तो लाग्छ । तर संयम गरेर राख्छु, किनभने मसँग सहन सक्ने र मान्छेको करुणा बुझ्ने क्षमता अन्य क्षेत्रमा भएका भन्दा कैयौं गुणा बढि छ जस्तो लाग्छ, किनभने सयौंका पीडाको साक्षी हुनुपर्ने विवशता सेवामा समर्पित डाक्टर र नर्समा हुन्छ ।
अझै पनि आपुर्ति हुन नसके भोलिका दिनमा कस्तो जोखिम देखिएला ?
अक्सिजनको आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुने हो भने कल्पना भन्दा बाहिरको भयावह स्थिति आउनसक्छ । जस्तो टीभीमा मित्र राष्ट्र भारतका केहि अस्पतालको दृश्य देखिने गरेको छ । हामी निरिह भएर रहनुपर्ने अवस्था हुनेछ । हाम्रो पनि अवस्था बिरामी भएमा अक्सिजनबिहिन भएर छट्पटाउनु पर्नेछ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा नेपालमै पहिलो उपेक्षित उष्ण प्रदेशिय रोग निदान यूनिट सञ्चालन